धार्मिक धर्म सबै मानव संस्कृतिमा सार्वभौम छैन
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईरहनु भएको छ। यसका बारेमा जानकारी दिईएको छ। धर्म र धर्म को स्पष्ट लोकप्रियता धार्मिक विश्वासीहरु को पार्थिव critheiques को उत्पीडनशील critiques को बिरुद्ध केहि आराम दिछन। आखिर, यदि धर्म र धर्म सार्वभौमिक छ भने, त्यसपछि सेकेन्डर पार्थिवको बारे केहि अजीब छ र तिनीहरूले प्रमाण को बोझको साथ हुनुपर्छ ...
धार्मिक सिद्धान्त सार्वभौम छैन
राम्रो, होइन। यो स्थितिको साथ दुई आधारभूत समस्याहरू छन्। पहिलो, भले पनि साँचो, एक विचार, विश्वास, वा विचारधारा लोकप्रियता छ कि यो सही वा उचित हो कि छैन मा असर छैन। प्रमाणको प्राथमिक बोझ सधैँ ती व्यक्तिलाई सकारात्मक प्रभावकारी बनाइन्छ, त्यस्ता तथ्यहरु जुन अहिले लोकप्रिय छ वा इतिहासको माध्यम बाट गरिएको छ। आफ्नो विचारधारा लोकप्रियता द्वारा सान्त्वना महसुस गर्ने जो कोहीलाई प्रभावी ढंगले मानिन्छ कि विचारधारा आफैले धेरै बलियो छैन।
दोस्रो, त्यहाँ यो स्थान पनि पहिलो स्थानमा साँचो हो भन्ने शङ्काको राम्रो कारणहरू छन्। अधिकांश समाजले इतिहासको माध्यमबाट साँच्चै एक प्रकारको वा अर्कोको अलौकिक धर्म भएको छ, तर यसको मतलब छैन कि तिनीहरू सबै छन्। यो शायद मान्छे को लागी सोच्न को लागी एक आश्चर्यको रूपमा आउनेछ, प्रश्न बिना, जुन धर्म र अलौकिक विश्वासहरू मानव समाजको विश्वव्यापी विशेषता भएको छ।
विल Durant ले धर्म को प्रति संदेह दृष्टिकोण र तथाकथित "आदिम," गैर-यूरोपीय संस्कृतियों बाट आलोचना को बारे मा जानकारी को संरक्षण गरेर एक महान सेवा गरे। मैले यो जानकारी अरू ठाउँमा फेला पार्न सकेन र यो आम धारणाहरूको विपरीत हो। यदि धर्म अलौकिक शक्तिको उपासनाको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ - अपर्याप्त परिभाषा, तर जसले जसले धेरै उद्देश्यहरूको लागि कार्य गर्दछ - त्यसपछि यो स्वीकार गर्नु पर्छ कि केहि संस्कृतिका सबैसँग कम वा कुनै धर्म छ।
अहिंसा र अफ्रिकामा शंकास्पदता
डोरन्टले बताउँछ, अफ्रिकामा पाइने केहि पिग्मी जनजातिहरू कुनै पहिचान योग्य सिन्च वा संस्कारको लागि मनाईएका थिए। त्यहाँ कुनै योगफल थिएन, कुनै देवताहरू, कुनै आत्माहरू थिएनन्। तिनीहरूका मृतकहरू विशेष समारोहहरू वा साथका चीजहरू बिना दण्डित भए र अरूलाई ध्यान दिएनन्। यात्रीहरूको रिपोर्टअनुसार तिनीहरू तिनीहरूका साधारण अन्धाहरू पनि देखा पर्थे।
क्यामरूनका जनजातिहरूले मात्र दुर्भावनापूर्ण देवताहरूमाथि विश्वास गरे र त्यसो गरेन कि उनीहरुले पलायन गर्न वा कुनै पनि प्रयास गरेनन्। उनीहरूको अनुसार, यो प्रयासलाई समेत बेवास्ता गर्न बेवास्ता थियो र जो केहि समस्याहरु संग उनको रास्ते मा राख्नु को लागी अधिक महत्वपूर्ण छ। अर्को समूह, सीलोनका वेदहले मात्र सम्भव छ कि देवताहरू अवस्थित हुन सक्छ तर कुनै थप गएनन्। कुनै पनि तरिकामा प्रार्थना वा नर्वे बलिदान गरिएको छैन।
जब विशेषतया एक देवतालाई सोध्नुभयो, डोरन्टले उनीहरूलाई धेरै गाह्रो तरिकाले जवाफ दिए:
"त्यो एक चट्टानमा छ? सेतो सेन्ट पहाडमा? एक रूखमा? मैले एक देवतालाई कहिल्यै देखे!"
Durant पनि रिपोर्ट गर्छ कि एक जुलुस, जब सूर्य र बढ्दो रूखहरू को स्थापना गर्ने जस्ता चीजहरू र शासकहरूलाई सोध्नुभयो भने:
"होइन, हामी तिनीहरूलाई देख्छौं, तर उनीहरूले कसरी आएन भनेर भन्न सक्दैन; हामी मान्दछौं कि तिनीहरू आफैले आए।"
उत्तरी अमेरिकामा सास फेर्न
ईश्वरको अस्तित्वको बाहिर निस्केको शंकाबाट टाढा जानु, केहि उत्तर अमेरिकी भारतीय जनजातिहरू एक देवतामा विश्वास गर्छन् तर सक्रिय रूपमा यसलाई पूजा गर्दैनन्।
पुरातन ग्रीसमा एपिसुरस जस्तै, तिनीहरूले यो ईश्वरलाई मानवीय परिस्थितिबाट टाढा टाढाको रूपमा मान्थे। Durant को अनुसार, एक एिपोन इंडियनले उनको दर्शनले यसो भने:
"हाम्रा आमाबाबु र हाम्रा ठूला पिताहरू मात्र पृथ्वीमा विचार गर्न चाहन्थे, केवल हेर्न खोज्न चाहन्थे कि उनीहरूको घोडाहरूका लागि सादा सशस्त्र घाँस र पानी। तिनीहरूले आफूलाई स्वर्गमा के गरिसकेका थिए, र जो सृष्टिकर्ता र राज्य थियो ताराहरूको। "
सबै भन्दा माथि हामी पाउँछौं, मानसिक "आदिम" संस्कृतिकाहरू पनि, धेरै विषयहरू जसले धर्मको वैधता र मूल्यको बारेमा मानिसहरूको अचम्मको निषेधमा रहिरहन्छ: वास्तवमा दावी गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई देख्न असमर्थता, कल्पना गर्न असहमति केहि अज्ञातको कारण के हो भनेर जान्दथ्यो, र यो धारणा कि भगवान पनि अवस्थित छ भने, यो अब सम्म हामी भन्दा बाहिर हाम्रो परिस्थितिको लागि अप्रासंगिक जस्तो छ।
Beginners को लागि Agnosticism - Agnosticism र Agnostics को बारे मा मूल तथ्य
के के हुनुहुन्छ? यसले के धर्म र धर्मको सम्मान गर्न के गर्छ?
के ईश्वरहरूले धार्मिक हुन सक्छन्? त्यहाँ धार्मिक पाहुनाहरू छन्?
बराक ओबामाको धार्मिक विश्वास र पृष्ठभूमि
रोजेनबर्ग एस्पियनजेस प्रकरण
कसले माइक्रोचिपलाई इन्कार गर्यो?
कसरी कम बल-उच्च बल गोल्फ खेल (र परिवर्तनहरू) प्ले गर्नुहोस्
सारांश (रचना र व्याकरण)
औपचारिक कार्य शैलीको लक्षण
स्टेजको पार्ट्स लेख्ने स्क्रिप्ट प्ले गर्नुहोस्
खराब आयरन चित्रहरू र मूल्यहरू
कप्तान मोर्गन, प्राइभेस्टर्स सबैभन्दा ठूलो
आफ्नो Homeschool पाठ्यक्रम को परिमार्जन को लागि सरल युक्तिहरु
सर्वश्रेष्ठ स्प्रिङ फ्लिंग गीतहरू
सारा Grimké: एंटीबेलम विरोधी दासत्व Feminist
लेबल परिसर परिभाषा
Michelangelo पोर्ट्रेट गैलरी
प्रसिद्ध आविष्कारहरू: ए ए Z
कसरी प्रयोगकर्ता-अनुकूल फारमहरू सिर्जना गर्ने
माउन्ट चढाउने के हो?
पहिलो जनन मस्तंग (1964 ½ - 1973)
अमेरिकन सिभिल युद्ध: जंगली जलविद्युत् आयोजना